Amanani Angcono On Kadokotela Izaphulelo Kanye Amakhuphoni, Ukubloga Ewusizo Kakhulu., Septhemba 2021
Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Inkampani, The Checkout Izilwane Ezifuywayo Ukuphuma Inkampani Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Izidakamizwa Vs. Umngani Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Umphakathi, Ukuphila Kahle Ezempilo Umphakathi Ezemidlalo Ezisindayo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Izindaba Ezokuzijabulisa
I-Zoloft vs. Prozac: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Zoloft vs. Prozac ilapha ukudangala kepha isebenza ngezindlela ezihlukile. Qhathanisa imiphumela emibi nezindleko zale mithi ukuthola ukuthi yikuphi okungcono.
Ingane yakho ivuka ngamehlo aqhephukile, anamanzi. Kungaba yizimpawu ze-conjunctivitis — isifo esithathelana kakhulu seso. Nansi indlela yokuphatha iso elibomvana ezinganeni.
ICymbalta vs. Lexapro: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
ICymbalta neLexapro zilapha ukudangala kepha zisebenza ngezindlela ezihlukile. Qhathanisa imiphumela emibi nezindleko zale mithi ukuthola ukuthi yikuphi okungcono.
Bona izidakamizwa ezinqunywe kakhulu ezingama-50 ngo-2020
Ama-antibiotic abanzi, i-vitamin D, ne-ibuprofen ... yini la maRx afana ngayo? Zingezinye zezidakamizwa ezinqunywe kakhulu zango-2020.
Izikrini Zelanga Eziphezulu Eziyishumi Eziphezulu Zobuso Bakho
Uma ufuna ukubukeka umncane, unempilo futhi unobulili obude, isikhathi eside, kulula ukuzivikela ekushisweni nasekugugeni ngaphambi kwesikhathi ngokusebenzisa isikrini selanga esihle ebusweni.
I-Effexor vs. Wellbutrin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Effexor ne-Wellbutrin zilapha ukudangala, kepha zisebenza ngezindlela ezihlukile. Qhathanisa imiphumela emibi nezindleko zale mithi ukuthola ukuthi yikuphi okungcono.
Ngangizula kanjani ekuhlolweni komdlavuza wesibeletho ngesikhathi sokukhulelwa
Kwatholakala ukuthi nginomdlavuza womlomo wesibeletho ngenkathi ngikhulelwe. Manje senginengane enempilo futhi anginomdlavuza — kodwa ngifunde okuningi nge-HPV nokukhulelwa endleleni.
Celebrex vs Naproxen: Umehluko Omkhulu nokufana
ICelebrex neNaproxen bobabili bavame ukunikezwa ukwelapha ubuhlungu. Siwaqhathanisa eceleni ukuze unqume ukuthi iyiphi inketho ekufanele kakhulu
I-Xiidra vs.Restasis: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
IXiidra neRestasis zilapha izifo zamehlo ezomile, kepha zisebenza ngezindlela ezihlukile. Qhathanisa imiphumela emibi nezindleko zale mithi ukuthola ukuthi yikuphi okungcono.
Ezimweni eziningi, ukuvivinya ama-antibiotic kuphephile. Noma, uhlobo olulodwa lwe-antibiotic lungakhuphula ingozi yokulimala. Uma ungabaza, vele uphumule.
Ungasho kanjani ukuthi ngabe izimpawu zakho ze-coronavirus zimnene, zilingene noma zinzima
Iningi lamacala e-COVID-19 azoba mnene kuye kokulingene. Nakhu ukuthi ungatshela kanjani umehluko ebukhali bezimpawu ze-coronavirus nokuthi ungabiza nini udokotela.
I-cystitis vs. UTI: Qhathanisa izimbangela, izimpawu, ukwelashwa nokuningi
Uyini umehluko phakathi kwe-cystitis vs. UTI? Qhathanisa umehluko wokuxilongwa, ukwelashwa, nokuvimbela i-cystitis ne-UTI.
9 Best G Spot Vibrator Wokuzijabulisa Okukhulu
Ukuze ufinyelele endaweni efanelekile yama-orgasms angaphandle kwalomhlaba, udinga isidlidlizi esingcono kakhulu se-G sakho. Ake siqhathanise phezulu kwemakethe ukuthola eyakho.
Izinhlelo zokusebenza namathuluzi ayisikhombisa amahle kakhulu kadokotela
Uyakhohlwa ukuthatha imishanguzo yakho kadokotela? Lezi zinhlelo zokusebenza zesikhumbuzo somuthi ezisizayo zizokuthumela izexwayiso ezenziwe ngokwezifiso zemed, refills, nokuningi.
Isikali sezingane ibuprofen, amafomu, namandla
Isilinganiso esejwayelekile sezingane ibuprofen ngamaphilisi ama-1-3 njalo emahoreni angu-6-8 kuya ngesisindo nobudala. Sebenzisa ishadi lomthamo lezingane zethu ukuthola isilinganiso esinconyiwe nesiphezulu se-ibuprofen yezingane.
Izihlalo Ezinhle Kakhulu Zokugeza: Yikuphi Okukufanele?
Ukuwa endlini yokugezela kungaholela ekulimaleni kanzima. Unganciphisa ubungozi bokuwa ngokusebenzisa isihlalo seshawa noma ibhentshi lokudlulisa ubhavu ukuzinza nokusekelwa.
Umhlahlandlela womzali wesibungu ezinganeni
I-ringworm ijwayelekile futhi imvamisa imnene, kepha kungaba nzima ukuyisusa. Qhathanisa umbandamu nezinye izimpungushe, futhi wazi ukuthi yini okufanele uyenze uma usola umbungu ezinganeni.
Ingabe ingane yakho ihlonza kabi nge-ADHD?
Kunezimpawu ezahlukahlukene ze-ADHD ezinganeni, ezenza kube lula ukungazinaki noma ukudida nezinye izimo. Nakhu ukuthi ungasho kanjani uma kungukuxilongwa okungalungile kwe-ADHD.
Amakhambi asekhaya angama-20 okuqunjelwa
Kunamakhambi amaningi emvelo, asekhaya okuqunjelwa. Sebenzisa lokhu kudla, iziphuzo, izithasiselo, ukuzivocavoca, kanye nama-laxatives angaphezulu kwekhawunta ukukusiza ukungcolisa.
Funda ukuthi ungayihlanganisa kanjani imishanguzo yokungezwani komzimba nenkathi engekho ethimula
Ngabe ukuhlanganisa i-Allegra ne-Claritin kulungile? Ungamthatha uBenadryl noClaritin? Sahlola ochwepheshe bezokwelapha ukuthola iqiniso ngokuxuba imithi yokwaliwa komzimba.
Kukhona iqiniso kulesi sisho: uyilokho okudlayo. Thola ukubambelela kwempilo yamathumbu futhi uthuthukise inhlalakahle yakho ngokuphelele ngalezi zinguquko zendlela yokuphila nokudla.
Kuphephile yini ukuthatha iVivvanse ngesikhathi sokukhulelwa?
Ayikho idatha eyanele yokumemezela i-Vyvanse ngesikhathi sokukhulelwa iphephe ngokuphelele futhi ingenangozi, kepha ingozi engahle ibe khona ingaphansi.
I-Focalin vs. Adderall: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
UFocalin no-Adderall baphatha i-ADHD, kepha basebenza ngezindlela ezihlukile. Qhathanisa imiphumela emibi nezindleko zale mithi ukuthola ukuthi yikuphi okungcono.
Kunezimbangela eziningi zesifuba somoya ezivela impova kuya ekufuyweni kwesilwane esifuywayo, kepha bewazi ukuthi ukuzivocavoca umzimba, ingcindezi, ngisho nesimo sezulu singadala ukuhlaselwa yisifuba somoya?
Kungani ubuchwepheshe bamakhemisi bubalulekile kuwo wonke amakhemisi
Imisebenzi yesazi samakhemisi idlula imisebenzi yokuphatha. Nazi izindlela ezine zobuchwepheshe bekhemisi ezisiza ukuthi ikhemisi lihambe kahle.
Ingabe umkhuhlane udutshulwe noma iTamiflu ivimbela i-COVID-19?
Akucaci ukuthi iTamiflu isebenza ngokumelene ne-coronavirus, futhi ukudutshulwa komkhuhlane ngo-2020 ngeke kuvimbele i-COVID-19 — kodwa kusabalulekile. Nakhu ukuthi kungani.
kanjani ukuqeda ukutheleleka kwefungal kuzinzwane
kuphephile yini ukuthatha i-2 800 mg ibuprofen
i-zpack ingadala ukutheleleka kwemvubelo
okufanele ukwenze ngamabhodlela emithi angenalutho
indlela engcono kakhulu yokuqeda ukutheleleka kwemvubelo